Ny tombony amin'ny kafe maitso
Olona an-tapitrisany eran-tany no mankafy kafe voajanahary ho an'ny tsirony masina sy ny tsirony manintona. Fantatray betsaka momba ny kafe mainty - ny fananany, ny vokany amin'ny fahasalamana, ny tombontsoa sy ny loza. Ary inona no kafe maitso, inona no ampiasainy? Ity no resahina amin'ny an-tsipiriany bebe kokoa amin'ity lahatsoratra ity.
Raha inoanao ilay angano, ny voalohany hahita ny toetra mahavariana amin'ny osy kafe! Nihinana bozaka mena izy ireo ary lasa mahery sy mavitrika. Ny mpiandry azy, Kaldi ny anarany, dia nahatsikaritra zavatra mampitolagaga toy izany, ary nanapa-kevitra ny hitsapa ny heriny amin'ny tenany. Ilay mpiandry ondry dia nizara zava-mahatalanjona mahagaga tamin'ny moanina, ary nanapa-kevitra ny mpihinam-boalavo ny saha avy amin'ny voankazo, mba hampientanentana ireo moanina hafa, mandritra ny ora maro amin'ny vavaka amin'ny alina. Tao Etiopia, efa ho 900 taona lasa izay.
Any amin'ny firenena samihafa, ny kafe dia mifangaro amin'ny fomba samihafa, fa ny taolam-paty taloha dia maina aloha, avy eo dia mafana, avy eo tapaka, ary avy eo dia mavo. Ny kafe maitso dia mivoaka amin'ny mena, fa tsy avy amin'ny voankazo matsiro, ary io no fahasamihafany lehibe indrindra. Amin'ny ankapobeny, ny tsiron'ny kafe maitso dia mitovy amin'ny tsiron'ny kafe mainty, fa ny "natiora" manokana dia manome ny fisotroana fantsona mamy kokoa, tsiro misimisy kokoa, ny fahaiza-mamindra tsara ny endrika sy ny fahasalaman'ireo izay misotro azy.
Tena ilaina ve ny kafe?
Maro ny mpahay siansa any amin'ny firenena maro manerana izao tontolo izao no nandinika ny tombotsoan'ny kafe maitso sy ny kafe mainty mainty. Ny fanandramana dia natao tamin'ny olona samy hafa taona sy fiaviana, tany amin'ny firenena samihafa, na ny biby aza dia nandray anjara tamin'ny fandalinana mitovy. Ny vokatra dia naneho ny lafy tsara tamin'ny kafe vokatry ny voankazo maitso. Ireto ny:
Ny asidra kôlônika, izay be dia be ao amin'ny voankazo kafe, dia miasa toy ny antioxidant mahery, manala tanteraka ny radicals maloto avy amin'ny zavamanan'olombelona.
Mampiavaka ny asidra kôlônika sy ny kafeinina mifanohitra amin'ny fiheveran-tena ny ady, manaporofo izany ny mpahay siansa avy any Japon. Ny fihinanana kafe maitso dia manakana ny vatana tsy hitehirizana ireo tahiry "matavy", ka mahatonga azy ho lany tamingana. Aza miantehitra amin'ny fahagagana, fa ny kafe dia tsy mamadika ny pyshechku ho toy ny akanjo tsara tarehy. Ny kafe dia tokony hifanaraka amin'ny sakafo sy ny fanatanjahan-tena!
Ny kafe kafe maitso dia ny alkaloid, ny tazo, ny kafeinina . Ireo singa ireo dia manampy ny kafe amin'ny feo, mampirisika ny hetsika ara-batana, mahatonga ny atidoha hiasa bebe kokoa.
Kaopy iray ka hatramin'ny roa dia afaka manaisotra ny migraine sy ny lohalika, hanandratra ny asan'ny fo.
Ny kafe kafe maitso dia tsy ampiasaina fotsiny amin'ny fisotro, fa koa amin'ny cosmetology. Ny solon'izy ireo dia tena mahagaga. Amin'ny alalan'ny fanampiany dia afaka manamafy orina sy mitondra ny volo ianao, manaisotra kadra, mikarakara hoditra maina, miady tsikelikely sy cellulite, mitondra ny hoditra.
Ary na dia misy kafe mahatalanjona toy izany aza dia tsy miteny hoe afaka misotro litatra ianao, tsy matahotra ny fahasalamanao. Tsara avokoa ny rehetra, noho izany dia mainty ny kafe, ary ny kafe maitso dia tokony hodorana amin'ny vola antonony. Ny kaopy iray na roa isan'andro dia mitondra fifaliana sy tombony, fa ho an'ny olona salama ihany!
Ny iray tsy afaka milaza fa tsy misy antony, kafe maitso dia manimba na mahasoa, momba ny doses ary iza no misotro azy tanteraka. Tokony hohadinoina ny kafe manoloana ireo rehetra izay mijaly "olana", ny atherosclerose, ny glaucome, ny hypertonia, ny tsy fahampian-tsakafo, ny hormonina, ny atherosclerose. Mazava loatra fa misotro kafe amin'ny olona izay sahirana amin'ny asan'ny vavony. Ho an'ireo zokiolona sy ankizy latsaky ny folo taona dia tsy tokony ho mamo koa ity fisotro.
Ankehitriny dia fantatrao tsara hoe inona no fampiasana kafe maitso, maninona no misy fiantraikany amin'ny maro amin'ny fomba tsara izany, ary iza no tsara kokoa hanome azy. Ampiharo izany fahalalana izany ho an'ny fahasalamanao!
Ny trainer Dolinov - fitsipika momba ny fampiasana mahomby
Fiomanana amin'ny chromium ho an'ny fatiantoka
Ny levenan'ny brewer ho an'ny fahazoana mavesatra
Ahoana no fisotroan'ny vilia vita amin'ny vilany?
Vetivety dia mihamatavy
Tea miaraka amin'ny citrone sy ny ginger ho an'ny fatiantoka
Feng Shui manohitra ny lanjany
Voangory hoditra ho an'ny lanjany
Ahoana no handoavana lanja amin'ny 2 volana?
Ringy amin'ny vatohara
Akanjo fitaratra vita amin'ny fitaratra misy fitaratra misy fitaratra
Ora misy jade
Ny fitomboana sy ny mari-pamantarana hafa avy amin'i Robert Downey Jr.
Demi-saika akanjo 2016
Ahoana ny fomba hampitombo tsipìka?
Loharano ao amin'ny firenena amin'ny tanany manokana
Mpiady revolisiona Moldavianina miaraka amin'ny paoma araka ny fomba mahazatra mahazatra
Thigh filet of turkey - fomba fitsaboana
Salady misy tonon-katsaka
Ambasadin'i Trinidad sy Tobago ao Okraina